【Mandarin Morning - yokuhlolwa Chinese eqhotyoshelwe Confucius Iziko】: amaziko ovavanyo hsk abaqeqeshiweyo Ikhowudi yokuhlolwa: 8980901
Imisebenzi Confucius Institute eziphambili zezi: ejamelene noluntu lwehlabathi kumazwe ukufundisa ulwimi Chinese; ukuqeqesha ootitshala ulwimi Chinese; iimviwo zesiqinisekiso utitshala ulwimi yaseTshayina noshishino Chinese; Ukubonelela ngemfundo Chinese, inkcubeko, intlalo kunye thethwano nolwazi lwezoqoqosho; ukwenza uphando in Contemporary China.
【Mandarin Morning-Hanban "Isiqinisekiso Ootitshala Chinese International" iziko loqeqesho isiqinisekiso leemviwo】: test sites Code: 8980950
Hanban Liziko iqhotyoshelwe Chinese Ministry of Education, lizimisele ukunika ihlabathi kwezibonelelo zolwimi nokufundisa nenkcubeko yaseTshayina kunye neenkonzo ukuze anelise iimfuno zabafundi phesheya Chinese, ngokuba uphuhliso odibeneyo iyantlukwano yenkcubeko kunye negalelo ekwakheni avumelana emhlabeni.
【Mandarin Morning, ngumbindi Practice Education International of Tianhua Institute of Shanghai Normal University】